सन्दुक रुईतको जीवनी लोकार्पण - Jagaran Post
Home/व्यक्ति बिशेष/सन्दुक रुईतको जीवनी लोकार्पण
सन्दुक रुईतको जीवनी लोकार्पण
२०७६ आश्विन ११, शनिबार १८:१८ गते
9 एक मिनेट भन्दा कम
आँखा सर्जन डा. सन्दुक रूइतको जीवनी सन्दुक रूइत लोकार्पण गरिएको छ । काठमाडौं धुम्बाराहीस्थित होटल अकामामा शनिबार आयोजित एक विशेष समारोहमा २१ वर्षसम्म पूर्ण दृष्टिविहीन भएर डा. रुइतले गरेको शल्यक्रियाबाट दृष्टि पाएका सल्यानका शिक्षक तोपबहादुर शर्माले पुस्तक लोकार्पण गरे । अस्ट्रेलियन पत्रकार अली ग्रिपरले लेखेको उक्त किताब लेखक संग्रौलाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा शर्माले आफूले २१ वर्षको उमेरसम्म पूर्ण रुपमा दृष्टिविहीन भएर जीवनयापन गर्नुपरेको र यसबीचमा डा. रुइतले आफूलाई नयाँ जीवन दिएको बताए । त्यसअघि आफूले धेरै दुःख पाए पनि डा. रुइतका कारण आफूले नयाँ संसार पाएको उनको भनाइ छ । आफ्नै हातबाट यति महान् डाक्टरको जीवनी लोकार्पण गर्न पाउनु जीवनकै अहोभाग्य भएको उनले बताए ।
शनिबार रुइतको जीवनी सन्दुक रुइत लोकार्पणका क्रममा बोल्दै संग्रौलाले भने, “जसले मानिसको जीवनमा ज्योति भर्न, ऊर्जा थप्न केही गर्छ, त्यो वास्तवमै उत्कृष्ट हुन्छ । जो अरुका लागि आफूलाई जोखिममा पार्न तयार हुन्छ, त्यो वीर हो, त्यसैले डा.रुइत नेपालका सांस्कृतिक वीर हुन् ।”
पुस्तकका अनुवादकसमेत रहेका संग्रौलाको भनाइमा, रुइतको जीवनयात्रा बहुआयामिक विशिष्टतायुक्त, प्रेरणादायी एवम् अनुकरणीय छ । “रुइत संसारमा असलमध्ये पनि असल व्यक्ति हुन्, यस्ता उत्कृष्ट मानिसको भव्य जीवन कथा अनुवाद गर्दाका क्षण मेरो जीवनका सुखद र सार्थक क्षण हुन्।”
अस्ट्रेलियन पत्रकार अली ग्रिपरले लेखेको उक्त किताब संग्रौलाले नेपालीमा अनुवाद गरेका हुन् ।
अन्तिम मुग़ल वादशाह बहादुर शाह जफ्फ़र
२०७५ चैत्र ३, आईतवार १५:०४ गते